उच्च प्रोटिन हुने सलह के साँच्चै खान हुन्छ त ? - Jhapa Online
उच्च प्रोटिन हुने सलह के साँच्चै खान हुन्छ त ?
झापा, २० असार । कोरोना भाइरसको आतङ्कले विश्वलाई थिचिरहेका बेला नेपालमा सलहको आतङ्क थपिएको छ । कोरोनाले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ भने सलह चाहिँ मानिसले मीठो मानेर भोजन गरेको चर्चा छ ।
अर्का कीट विज्ञ सञ्जय विष्टले मानिसले खान हुने÷नहुने सुुझाव नदिने तर कुखुरा र हाँसका लागि दानाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । किसान र उद्यमीलाई त्यही सुझाएको जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
इन्जिनियरको कमाइ ५ करोड, अख्तियारले गर्यो मुद्दा दर्ता